Fanenjehana mpitondra ambony :: Maniry ny hisian’ny fanavaozana lalàna ny minisiteran’ny Fitsarana • AoRaha
Miaiky ny fahasarotan’ny fanenjehana ara-pitsarana an’ireo olom-panjakana ambony ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana. “Tokony ho efa eritreretina dieny izao ihany ny fomba hahafahana manamboatra ny lalàna mifehy an’io fanenjehana an’ireo mpitondra ambony io », hoy i Imbiky Herilaza, sekretera jeneralin’ny minisitera.
Olana mitoetra miteraka ny fiandrasan’ny Fitsarana manokana an’ireo mpitondra ambony (HCJ) ny hevitr’ireo depiote eny amin’ny Antenimierampirenena amin’ny fanenjehana na tsia azy ireo.
«Lasa sarotra ny fampiharana ny lalàna. Ahoana no hahafahan’ny Antenimierampirenena manana fijery tsy mitanila, na ihany koa tsy mijery olon’antoko, na izany voalaza fa resaka « malety » izany ka hanaja ny tany tan-dalàna. Misy olona tsotra, ohatra, efa voaheloka. Ahoana amin’izay ny fitsarana an’ireo olona ambony ireo satria raharaha iray ihany no tsaraina? ”, hoy ity tompon’andraikitra ambony ao amin’ny minisiteran’ny Fitsarana ity, tao amin’ny onjam-peon’ny Radio Antsiva, omaly.
Nohamafisiny fa raharaha telo ambin’ny folo no efa eo am-pelatanan’ny Antenimierampirenena ka hiandrasana ny fanapahan-kevitr’ireo solombavambahoaka. Amin’ny fiandohan’ny volana mey 2020 ho avy izao no handinika momba an’izany ry zareo eny Tsimbazaza.
Fiparitahana valanaretina :: Miitatra amin’ny firenena maro ny “Coronavirus”
Famerenana fifidianana ben’ny tanana :: Miandry vokatra feno ny minisiteran’ny Atitany vao hamaritra tetiandro